I-Chamber of Architects yeRiphabhulikhi yasePoland → IDODU LENDLELA YOKULIMA
Noma, umsebenzi wokwakha wumsebenzi ozimele ongaletha ukwaneliseka okuningi kanye nezinzuzo zezinto ezibonakalayo, kepha indlela yokuqala umsebenzi njengomakhi ayilula futhi ayifushane. Ngaphezu kwesigaba esisobala sokutadisha nokutadisha ngokujulile, umakhi ofisayo kufanele futhi abe owe-IARP (IChamber of Architects yeRiphabhulikhi yasePoland).
Buka ikhathalogi yomkhiqizo eku-inthanethi >> noma izinhlu zokulanda >>
Ungaba kanjani umakhi?
Isihloko sonjiniyela wezakhiwo singatholakala ngemuva kokuphothula izifundo zokuqala zomjikelezo. Iziqu ze-master kunjiniyela wezakhiwo zitholakala ngemuva kokuphothula izifundo zomjikelezo wesibili. Kodwa-ke, isihloko asikuniki ilungelo lokuthi wenze lo msebenzi ngokushesha. Umthetho wasePoland uhlinzekela ukuthi umuntu osohlwini lweChamber of Architects yaseRiphabhulikhi yasePoland kuphela ongumklami ofanele ukuqeqeshwa. Ngakho-ke i-IARP ukuphela kwesango lomsebenzi womqambi ofisa ukufuna ukuqedela iphrojekthi yakhe yokuqala yezentengiso.
Bheka futhi: UMA Design Award 2020 wohlobo lwakwaMetalco indawo yokukhosela ibhasi esebenza ngalo, okuyingxenye yephrojekthi ye-SMART City
IChamber of Architects yeRiphabhulikhi yasePoland ingumzimba omsebenzi wayo osemqoka okuhlanganiswe kulesi simiso ukuvikela izikhala futhi ngaphezu kwakho konke, ukwakhiwa kwezakhiwo okubonwa njengento enhle yomphakathi. Ngaphezu kwalokho, i-IARP ibhekela ukusebenza okufanele kwemisebenzi yezobuchwepheshe esetshenziselwa ukwakha futhi ihlola ikhwalithi yobuchwepheshe bokwakha obusetshenziselwe ubuciko bokwakha. Vele, lokhu kubhekwa kumbandakanya kuphela amalungu eChamber of Architects yeRiphabhliki yasePoland. Ngalesi sizathu, kubaluleke kakhulu kumakhi wezakhiwo osemncane ofuna ukwenza owokuqala iphrojekthi yezentengisoukuba nge-IARP.
Bheka futhi: Umthetho wokwakha nobuncane bezakhiwo
Imisebenzi nemisebenzi yeChamber of Architects yeRiphabhulikhi yasePoland
IChamber of Architects yeRiphabhulikhi yasePoland nayo ibhekana neminye imisebenzi eyengeziwe, efaka, phakathi kokunye: ukugcina umsebenzi womakhi wezakhiwo njengezimele, ukuvikela isihloko se-IARP Architect, ukuthuthukisa amazinga athile aphathelene nokusebenza komsebenzi ngabakhi bezakhiwo, ukusebenza ngemithetho nokulungisa imithethonqubo ekhokhwa amalungu, futhi nokufuna ukwethula uhlelo oluhambisana nohlelo lwe-EU emanyuvesi ePoland.
Ekwenzeni eminye imisebenzi, i-IARP ibambisana nohulumeni wokuzibusa onjiniyela onjiniyela. IChamber of Architects yeRiphabhliki yasePoland nayo isebenza ngokubambisana nezinye izinhlangano eziningi ukufeza izinhloso zayo. IChamber of Architects yeRiphabhulikhi yasePoland ayibhekele kuphela ukubeka imigomo yokusebenza nezindinganiso, kepha futhi ibhekana nomsebenzi wezemfundo, wesayensi, wezamasiko nezesayensi-ezobuchwepheshe.
Ngaphandle komsebenzi obanzi we-IARP, kufanele kukhunjulwe ukuthi inhloso yawo eyinhloko yokuvikela ukuvikela isikhala nokwakha njengento enhle yomphakathi. Yonke imisebenzi kanye nesakhiwo sonke se-IARP kuhloselwe le nhloso, futhi yonke imisebenzi eseceleni kufanele ibonwe njengokungezwa kulo msebenzi owumgogodla.
Isakhiwo se-IARP siqukethe I-National Chamber of Architects kanye neziphathimandla, kanye namagumbi esifunda angama-16 abaklami bezakhiwo.
Amalungelo amalungu nezibopho zawo
Ngokuba yi-IARP, amalungu angathembela emalungelweni athile namalungelo abengeke akwazi ukuwajabulela ngaphandle kokuba ngamalungu esigumbi. Ngakolunye uhlangothi, ukuba yilungu leChamber of Architects yeRiphabhliki yasePoland nakho kufaka izibopho ezithile.
Le misebenzi ifaka: ukugcinwa kokuziphatha okuhle kanye nokuzivumelanisa nemithetho yayo, ukubambisana neChamber of Architects yeRiphabhulikhi yasePoland, ukulandela imithetho nemithetho ehlobene nolwazi lwezobuchwepheshe kanye okokugqoka, uthatha isinqumo ngezinqumo ze-IARP futhi ukhokha imali yobulungu ejwayelekile.
Amalungu e-IARP angathembela kula malungelo namalungelo alandelayo: angasebenzisa imisebenzi yokuzisiza nosizo lwezomthetho lwegumbi, futhi angathembela kusizo ekuthuthukiseni iziqu zawo zobungcweti.
Bheka futhi: Amabhodwe engadi nezinto zawo - iyiphi enhle kunazo zonke?
Ikhomishini Yezemfundo Yezwe
Lapho kubhalwa ngeChamber of Architects of the Republic of Poland, akunakwenzeka ukuthi ingasaphathwa iKomidi Leziqu Likazwelonke. Inesibopho sokunikeza iziqu zobungcweti. Kungumzimba okhethekile obuye ucaciswe ezimisweni zekamelo. Akungabazeki ukuthi noma imuphi umakhi ofisa ukuthola iziqu zakhe kuzofanele abhekane neKomidi Leziqu Likazwelonke. Ngaphezu kwalokho, imisebenzi yeKomidi Leziqu Likazwelonke ibuye ibandakanye ukwenganyelwa kwemisebenzi yamakomidi wokukhetha, futhi imisebenzi yayo ichazwa ngumthetho nemithethonqubo okufanele isebenze kuyo.
Ukuxhaswa ngemali kweChamber of Architects yeRiphabhulikhi yasePoland
Ukuze i-IARP isebenze, idinga ukusebenzisa izimpahla ezithile. Ngenhloso yokuxhasa ngemisebenzi yayo, iChamber of Architects yeRiphabhulikhi ithola imali kwizimali zobulungu, emisebenzini yebhizinisi, iminikelo noxhaso, kanye nakwezinye izinzuzo. Imisebenzi yezomnotho engaqhutshwa amakamelo ezifunda kanye ne-National Chamber ye-IARP ayinqunyelwe, kodwa-ke, ngeke kube yimisebenzi yokutshalwa kwezimali nemisebenzi emkhakheni wezokwakha, wokwakha, owomphakathi kanye nowokuhlaziya ukwakhiwa. Ukuvinjwa okunjalo kufanele kungamangali muntu - umsebenzi webhizinisi akufanele uthinte ukuzimela kweChamber of Architects yeRiphabhulikhi yasePoland.
I-Lower Silesian Chamber of Architectsigumbi labakhiindlu yabakhi bezakhiwo gdańskI-Chamber of Architects KatowiceI-Chamber of Architects Krakowindlu yezakhiwo izikebheindlu yabakhi bezakhiwo yokungenaIChamber of Architects LublinI-Chamber of Architects Olsztynindlu yezakhiwo poznańIgumbi labaklami beRiphabhulikhi yasePolandiChamber of Architects yeRiphabhulikhi yasePolandISilesian Chamber of Architectsigumbi labakhi bezakhiwoIChamber of Architects Warsawigumbi labakhi bezakhiwo wrocławIgumbi likazwelonke labakhi bezakhiwoI-eródź Chamber of ArchitectsiMałopolska Chamber of ArchitectsI-Małopolska District Chamber of ArchitectsMazovian Chamber of ArchitectsMasovian District Chamber of ArchitectsI-Opole Chamber of ArchitectsI-Polish Chamber of ArchitectsI-Pomeranian Chamber of ArchitectsISilesian Chamber of ArchitectsISilesian District Chamber of ArchitectsI-Wielkopolska Chamber of ArchitectsI-West Pomeranian Chamber of Architects
Iziteshi zokulahla ukungasebenzi / iziteshi zokuhlanzeka zezandla yinto entsha ekunikezelweni kwethu njengezinto zokwakha ezincane. Isisombululo esenza lula ...